ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နီကိုလပ်စ် ဆာကိုဇီအား ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွင် တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် အပြစ်တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ပဲရစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နီကိုလပ်စ် ဆာကိုဇီ (Nicolas Sarkozy) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအတွင်း တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် အကျဉ်းထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ်တစ်နှစ်ကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း ပဲရစ်မြို့ရှိ တရားရုံးက စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။ဆာကိုဇီသည် ၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် တရားဝင်ကန့်သတ်ထားသော ငွေကြေးပမာဏထက် နှစ်ကြိမ်နီးပါး ကျော်လွန်သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ၎င်းက စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ထောက်ပံ့သယ်ပို့ကိစ္စများတွင် မည်သည့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမျှမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် “တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေသည့် အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း သတိပေးချက် ရရှိပြီးနောက် အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေးများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း” တရားရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုပြစ်ဒဏ်အသစ်သည် ဆာကိုဇီအနေဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့် အရှိန်အဝါကို အသုံးချ၍ ဆွယ်တရားဟောခြင်းကြောင့် သီးခြားစစ်ဆေးခံရမှုတွင် ပြစ်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီးနောက် ၇ လအကြာ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုစစ်ဆေးခြင်းတွင် ဆာကိုဇီသည် ၎င်း၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေသော L’Oreal ၏ အမွေဆက်ခံသူဟောင်း လီလီအန် ဘတ်တန်ကော့တ် (Liliane Bettencourt) ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များအဖြစ် စုံစမ်းမေးမြန်းမှု သတင်းပေးချက်များ ဖလှယ်ရာတွင် ရှေ့နေတစ်ဦးအား မိုနာကိုမြို့တွင် နာမည်ကြီးအလုပ်တစ်ခုဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟု အပြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအား ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ဦးဆောင်ခဲ့သော ဆာကိုဇီသည် ၎င်းပြစ်မှုတွင် မမှန်မကန်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုထားခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့အား ဆန့်ကျင်ခဲ့သဖြင့် တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
PARIS, Sept. 30 (Xinhua) — Former French President Nicolas Sarkozy was sentenced to one year in prison for illegally financing his election campaign in 2012,acourt in Paris announced on Thursday.
Sarkozy was found guilty of having spent almost twice the legal limit on his reelection bid. He has denied any involvement in the logistics of his campaign, but the court said he “continued the organization of meetings after having been warned in writing of the risk of exceeding the legal ceiling.”
This new conviction came seven months after Sarkozy gotathree-year prison sentence on charges of corruption and influence peddling inaseparate trial.
In that trial, Sarkozy was found guilty of proposingaprestigious job in Monaco toaprosecutor in exchange for tip-offs on an inquiry into allegations that he had exploited the mental frailty of late L’Oreal heiress, Liliane Bettencourt, to enjoy donations in cash to finance his 2007 presidential campaign.
Sarkozy, who led France from 2007 to 2012, had denied wrongdoing in that case and appealed against the ruling. Enditem
File photo taken on March 1, 2021 shows former French President Nicolas Sarkozy arriving at the Paris court house in Paris, France. Former French President Nicolas Sarkozy was sentenced to one year in prison for illegally financing his election campaign in 2012,acourt in Paris announced on Thursday. (Photo by Aurelien Morissard/Xinhua)